နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခရီးလိုက်မပို့နိုင်ပေမယ့် ရက်လည်တဲ့နေ့လေးမှာ ကိုရေမွန် နေခဲ့တဲ့ တိုက်ခန်းလေးကို သွားခဲ့တဲ့ လိမ္မော်သီး….. – Cele Oscar
နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခရီးလိုက်မပို့နိုင်ပေမယ့် ရက်လည်တဲ့နေ့လေးမှာ ကိုရေမွန် နေခဲ့တဲ့ တိုက်ခန်းလေးကို သွားခဲ့တဲ့ လိမ္မော်သီး…..
June 29, 2021 By L YC Celebrity
ပရိသတျ တှေ ခဈြခငျ အားပေးရတဲ့ အဆိုတျော လိမ်မျောသီး ကတော့ ထူးခွားတဲ့ အသံ ပါဝါ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားသူ ဖွဈပွီး သီခငျြးတှေ ကို အငျအား အ ပွညျ့ နဲ့ သီဆိုတတျတာ ဖွဈ ပါတယျ ။ ယနေ့ အခြိနျ အထိ တိုငျအောငျ သီခငျြးတှေ အမြားအပွား ဖနျတီး ခဲ့တဲ့ လိမ်မျောသီး က တဈကိုယျတျော အခှေ တှေ လညျး ထှကျရှိခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ လိမ်မျောသီးက ခဈြစရာ ကောငျး တဲ့ သူမ ရဲ့ ညီမလေး ဝလောရီ နဲ့ ဆိုရငျလညျး သီခငျြးတှေ ဖနျတီးပွီး အတူတူ သီဆိုခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ဒီနလေ့ေး မှာ လိမ်မောသီး က မကွာခငျ ရကျပိုငျးက ကှယျလှနျ သှားတဲ့ ရမှေနျ ရဲ့ တိုကျခနျး လေးကို ကိုယျတိုငျ သှားရောကျ ဖွဈခဲ့ကွောငျး ဖျောပွ လာပါတယျ ။ ဒီနဆေို့ရငျ ရမှေနျ ကှယျလှနျ သှားတာ ရကျလညျ နလေ့ေးလညျး ဖွဈပါတယျ ။ ရမှေနျ ရဲ့ ရကျလညျ နမှေ့ာ သူ့ရဲ့ အမှတျတရ တှေ ပွညျ့နတေဲ့ အခနျး ထဲက အမှတျတရ ပုံရိပျ လေးတှေ ကို ဖျောပွ လာတာ ဖွဈပါတယျ ။
ပုံရိပျ လေးတှေ နဲ့ အတူ ” နောကျဆုံး ခရီး လိုကျမပို့ နိုငျခဲ့ ပမေယျ့… ရကျလညျ တော့ ရောကျခဲ့တယျ… ကိုကွီး အေးခမျြးတဲ့ ဘုံဘဝ ရောကျရှိနေ မယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ… ငွိမျးခမျြး ပါစေ ကိုကွီး …. ” ဆိုတဲ့ စာလေး ကိုလညျး ဝမျးနညျးကွောငျး အမှတျတရ ရေးသား ဖျောပွထားရာ စိတျမကောငျး ဖွဈမိတာ အမှနျပါပဲနျော ။ ရမှေနျလညျး ကောငျးရာ သု တိလားပါစေ ဆုတောငျး ပေးလိုကျပါတယျ ။
Photo – Mi Mon Mon Thike
ပရိသတ် တွေ ချစ်ခင် အားပေးရတဲ့ အဆိုတော် လိမ္မော်သီး ကတော့ ထူးခြားတဲ့ အသံ ပါဝါ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူ ဖြစ်ပြီး သီချင်းတွေ ကို အင်အား အ ပြည့် နဲ့ သီဆိုတတ်တာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ယနေ့ အချိန် အထိ တိုင်အောင် သီချင်းတွေ အများအပြား ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ လိမ္မော်သီး က တစ်ကိုယ်တော် အခွေ တွေ လည်း ထွက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် လိမ္မော်သီးက ချစ်စရာ ကောင်း တဲ့ သူမ ရဲ့ ညီမလေး ဝေလာရီ နဲ့ ဆိုရင်လည်း သီချင်းတွေ ဖန်တီးပြီး အတူတူ သီဆိုခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနေ့လေး မှာ လိမ္မောသီး က မကြာခင် ရက်ပိုင်းက ကွယ်လွန် သွားတဲ့ ရေမွန် ရဲ့ တိုက်ခန်း လေးကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြ လာပါတယ် ။ ဒီနေ့ဆိုရင် ရေမွန် ကွယ်လွန် သွားတာ ရက်လည် နေ့လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ရေမွန် ရဲ့ ရက်လည် နေ့မှာ သူ့ရဲ့ အမှတ်တရ တွေ ပြည့်နေတဲ့ အခန်း ထဲက အမှတ်တရ ပုံရိပ် လေးတွေ ကို ဖော်ပြ လာတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပုံရိပ် လေးတွေ နဲ့ အတူ ” နောက်ဆုံး ခရီး လိုက်မပို့ နိုင်ခဲ့ ပေမယ့်… ရက်လည် တော့ ရောက်ခဲ့တယ်… ကိုကြီး အေးချမ်းတဲ့ ဘုံဘဝ ရောက်ရှိနေ မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်… ငြိမ်းချမ်း ပါစေ ကိုကြီး …. ” ဆိုတဲ့ စာလေး ကိုလည်း ဝမ်းနည်းကြောင်း အမှတ်တရ ရေးသား ဖော်ပြထားရာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတာ အမှန်ပါပဲနော် ။ ရေမွန်လည်း ကောင်းရာ သု တိလားပါစေ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပရိတ်သတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေဖို့ ကိုအုန်းသီး ကိုဆေးကုသပေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ပေးလာတဲ့ ထူးခန့်ကျော်….
အခုရက်ပိုင်း အလှူအတန်းတွေ လုပ်ပြနေတဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မင်းသား နေတိုး……